प्रदेश राजधानीको विकासमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेकी छु : RajdhaniDaily.com
Homeअन्तर्वार्ताप्रदेश राजधानीको विकासमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेकी छु
पदमा खड्का, प्रदेश सांसद, कर्णली प्रदेश
० कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको तीन वर्षमा गरेको कामकारबाही सन्तोषजनक पाउनुभएको छ ?
० के अहिले नै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भइसकेको हो र ?
० तपाईँले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ?
० प्रदेश राजधानीको विकासमा तपाईँले के–के प्रयास गर्नुभयो ?
० सामाजिक विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सदस्य रहेको समितिले मुख्य गरी यस अवधिमा के–के काम सम्पन्न ग-यो ?
– सामाजिक विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिएको छ । यिनै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई समितिले निरन्तर अनुगमन, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श, छलफल अन्तक्र्रिया कानुन निर्माणमा सुझाव विभिन्न दिवस व्यवस्थित रूपले मनाउने सन्दर्भमा सहभागिता जनाएको अवस्था छ । प्रदेशसभाको सक्रिय समितिमा सामाजिक विकास समिति बनाएका छौं । सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिने काम पनि भएका छन् ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ ले असर नपु-याएको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको...
लकडाउनमा अवैध उत्खनन गरेको ढुङ्गा नगरपालिकाद्वारा जफत
दाङमा एम्बुलेन्सले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा पोख्रेलको मुत्यु